Kedu ihe bụ AWS Certification? Ndepụta Ọmụmụ Ihe AWS | Ọzụzụ Ọzụzụ
Kedu ikikere AWS?
Ndepụta nke ọmụmụ AWS & Certifications
AWS - Nhazi Ihe Ntuzi:
Nhazi na AWS:
AWS Na-enye akwụkwọ nhazi na ọkwa ọzụzụ maka Ntugharị ndị na-emepụta ihe, ndị na-elekọta SysOps na ndị mmepe. Nchọpụta Nchọpụta Ọhụrụ ọhụrụ na-enye ọkwa maka ọkwa maka ndị Ntugharị & Ndị ọrụ DevOps maka AWS.
AWS nka di mkpa:
Ebumnuche AWS Business Essentials ezubere iji nyere gị aka ịmatakwu igwe ojii AWS, na ihe mgbaru ọsọ na ị dị njikere iji nyocha na ịmepe usoro ịhọrọ igwe ojii. Usoro a na-ekwu banyere isi ihe nke AWS na mgbagwoju igwe ojii maka azụmahịa gị, gụnyere nchekwa, na uru ndị metụtara ego. Ọ na-enye usoro nhazi nke igwe ojii na-amị mkpụrụ, na-ekwu maka nzukọ na-agbanwe agbanwe IT na akụkụ nnweta, na nyochaa otú ọrụ AWS nwere ike isi gbanwee ọrụ nlekọta ego. Ọzụzụ #AWS
AWS Certified Solutions Architect - A na-enyocha ule maka ndị nwere ahụmịhe ịmepụta ngwa na usoro na usoro AWS. Ihe nyocha nke ị ga-aghọta maka nyocha a gụnyere: Ịmepụta ma na-arụ ọrụ nke nwere ike ịnweta, nke nwere ike ịnweta ya, na usoro mmejọ na AWS. Nkwekọrịta #AWS
Ndị na-emepụta ihe na AWS na-ekpuchi isi ihe nke iwu ụlọ ọrụ IT na AWS. Usoro a bu n'obi igosi ndokwa ndi ozo ka esi eme ka ndi mmadu jiri AWS Cloud mee ihe site n'inyocha oru AWS na otu ndi oru ndia si adi n'ime ndokwa. Omume a na-eme ka a mara mma omume AWS nke kachasị elu igwe na ihe atumatu atumatu a na-enye aka iji mee ka ndi mmadu chee echiche nke oma banyere usoro ndi ozo n'usoro IT na AWS. Nyocha gbasara akụkọ ihe niile na usoro ahụ na-egosi otú ụfọdụ ndị ahịa AWS si kọwaa usoro ha na usoro na ọrụ ha mere. Ọmụmụ Ihe Ọmụmụ #AWS
Kedu ihe mere AWS Asambodo Ji Dị Mkpa? AWS Onye Nlekọta Onyenye Ụgwọ na Dollar